Semalt: 5 Nzira Dzokuwedzera Nhamba Yako SEO Kuongorora Newekugadzira Web
Indaneti yakazara mazano pa SEO. Ne webwendefa ing, zvinoita kuti tishandure mawekwikiti ewebsite kuti tione mazano okuti tiende navo. Zvichida iwe unofanirwa kutyora musoro wenyaya, meta tsanangudzo kana mazwi makuru, unofanira kushandisa kodzero yezvinyorwa scraper kuti uite basa rako.
Pano pane nzira dzakasiyana-siyana dzekuwedzera huwandu hwekuongorora kwe SEO newe web scraping.
1. Munyori wenhau Keyword Analysis:
Unogona nyore kukanganisa webhusaiti yako yekambani uye kuwana zvirimo zvayo nokuda kwekukosha kwekuongorora. Nokuda kweizvi, unogona kushandisa SEMRush uye tsvaga mazwi akakodzera. SEMRush iyi yakazara data scraping chigadzirwa. Nezvo, unogona kuona kuti ndeapi mazwi ako vadzikwi vari kushandisa. Uyewo, unogona kuwana mutsara wake wemiswe uye mutsara wemisungo uye kuwana nzvimbo yako yakarongeka nenzira iri nani.
2. Kuitwa kwemapeji:
Zvimwe zvakasiyana-siyana zve SEO nemishando zvinotarisa pamadziro uye mazwi ezvinyorwa zvepamusoro. Zvakakosha ku kutsvaga data kuvandudza kushanda kwemajiji ako ewebhu. Iwe unoda kuendesa motokari yakawanda kune webhusaiti yako kana blog? Google Adwords API inoshandiswa kwazvo iyo inoparadza data uye inokamba mapeji ako ewebhu nyore nyore. Uyewo, inobatsira kuvandudza kushanda kwewebsite yako uye kunowedzera kusarudzwa kwayo.
Kimono Labs uye Import. Io ndiwo maviri akasiyana web scraping tools . Vanobatsira kubvisa meta-data uye kurongedza mapeji edu ewebhu nyore nyore. Kana iwe uchida kuziva kuti sei mudivi webhutori wako ari kutarisana nani pane yako, unogona kuedza chero ipi zvayo maturusi uye ona mazwi akakodzera mazwi ewebsite yako.Nekutumira. io uye Kimono, unogona nyore nyore kubvisa meta tsanangudzo, mazita ekuremekedza, uye meta tags uye inogona kuvandudza kushanda kwewebsite yako.
4. Nzvimbo dzepaIndaneti dzepamusoro yepamusoro:
Chinangwa cheSEO ndechokuwedzera peji yepamusoro nekuda kwemashoko akapiwa. Vese webmasters vanoda SEO web scraper iyo inogona kuvabatsira kuti vavandudze kushanda kwenzvimbo dzavo. Kana imwe nguva data yakanyatsogadziriswa, unogona kuzvinyora iwe pachako bhurogi uye kutyaira chitarisiko chepamusoro kwairi. Iwe unogona kuedza Scrapy, chinhu chekuwedzera dhidhiyo chinoparadzira mashoko kubva kune mawebsite akasiyana-siyana usingashandisi mazwi ako makuru. Imwe nzira yekuwedzera nheyo ndeyokuwana izvo vadzikwi vako vari kuita uye kutevera mawebsite avo.
5. Mukati nekunze mazano:
Zvakachengeteka kutaura kuti web scraping uye SEO vane ukama hwakasimba. Iwe nguva dzose unoda mukati nekunze zvibatanidzo zvepamusoro yekutsvaga injini. Ne Getleft, ParseHub uye OutWit Hub, haugoni kungokamba uye kubvisa mapeji ako ewebhu asiwo kuvaka simba mukati.
Newebhu yekugadzira zvishandiso, unogona kuona nyore nyore kuti ingani maikwi mazwi ewemushupiti yako yakashandiswa. Panofanira kuva nehuwandu hwehuwandu hwemashoko ehupenyu hwako, uye inogona kubatsira kudzivirira keyword stuffing. Uyezve, unogona kuverenga data inobatsira kubva mavhidhiyo nemifananidzo. Nekwakanaka kugadzira zvishandiso , unogona nyore nyore kubvisa ruzivo kubva pamifananidzo uye mavhidhiyo uye unogona kusimbisa nzvimbo yako kusvika pamwero. Muchidimbu, kubhurwa kwewebhu uye SEO kunogona kubatsira kunzwisisa kuti mupikisi wako ari kusvika sei kumusoro kwekutsvaga mitsva yekutsvaga Source .